Nleta FLORIDA na-ebupụta oghere njem njem nnweta
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Inweta njem nleta » Nleta FLORIDA na-ebupụta oghere njem njem nnweta
Inweta njem nleta • Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Na mbọ iji kwalite Sunshine State dị ka ebe kachasị maka mkpa pụrụ iche njem, VISIT FLORIDA kwalitere ebe a na-eme njem nke na-egosipụta ọtụtụ ihe eji eme njem maka ndị njem nwere mkpa pụrụ iche. Ndị ọbịa nwere ike ịchọta ozi sitere na ebe nkiri, osimiri, ogige ntụrụndụ, ihe omume na ihe ndị ọzọ.
VISIT FLORIDA President na CEO Dana Young kwuru, “Amaara Florida maka ogige ntụrụndụ isiokwu ya, ogige ntụrụndụ dị jụụ na ụsọ mmiri mara mma, mana ihe ndị ọbịa anyị nwere ike amaghị bụ na ọtụtụ nwere ike ịnweta ndị njem nwere mkpa pụrụ iche. Anyị chọrọ iwepụ nchekasị nke ịhazi ezumike Florida ma hụ na ndị njem niile maara Sunshine State bụ ebe onye ọ bụla nwere ike ịnụ ụtọ ya. ”
Ogige ntụrụndụ nke Florida na ebe nkiri na-enye ọrụ ndị ọbịa nke nwere ozi na enyemaka gụnyere oche oche, ndị ntụgharị asụsụ ogbi, ngwaọrụ ndị na-ege ntị, wdg.
Ọtụtụ n'ụsọ osimiri na ogige ntụrụndụ nke Florida na-abụkwa ndị enyi na-akwagharị, na-enye ụzọ ndị nwere ike ịnweta oche na oche oche oche nkwagharị. Crandon Park Beach na Key Biscayne na Haulover Beach dị na Miami na-enye ebe a na-agbazite oche nkwagharị n'ụsọ osimiri n'efu. Ọtụtụ ogige ntụrụndụ Florida na-enyekwa saịtị nnabata, ụzọ ụkwụ na ama egwuregwu. Oscar Scherer State Park na Sarasota County na-enye ndị nwere ike ịnweta kayak na ụgbọ mmiri na oche oche oche.
Ezinụlọ nwere ụmụaka nwere mkpa pụrụ iche ga-enwe ọtụtụ nhọrọ mgbe ha na-eme atụmatụ ezumike ha na Florida, gụnyere ngalaba maka iso ụmụaka nwere Autism eme njem. Maapụ mmekọrịta na ederede zuru ezu na-eme atụmatụ ezumike maka ezinụlọ dị mfe ma nwee ntụkwasị obi. Gaa na ebe nkiri dị n'etiti ezinụlọ dịka Museum of Science na History na Jacksonville, nke na-eme ka echiche na mbara ụwa ya na ihe ngosi sayensị mmekọrịta.
Inyocha ihe banyere mkpa pụrụ iche nke Florida, gaa VISITFLORIDA.com/Nweta.